Iwayisa kanjani i-Wallet Yeselula Ukuthengisa KweDrayivu | Martech Zone
NgoLwesibili, Novemba 24, 2015 NgoLwesibili, Novemba 24, 2015 Douglas Karr
Ngiphatha i-iPhone yami ngecala lesikhumba elenziwe ngesandla elihle kakhulu I-Pad ne-Quill enendawo kamazisi wami namanye amakhadi wesikweletu kepha hhayi okunye okuningi. Ngenxa yalokhu, ngincika kuzinhlelo zokusebenza zeselula nakuwalethi wami weselula kancane. Uhlelo lokusebenza olulodwa engithandane nalo yi- Into yokufaka ukhiye, engivumela ukuthi ngilahle wonke amakhadi ami ekilabhu bese ngiwafaka endaweni eyodwa.
Ngokushesha ngemuva kokulayisha i-Key Ring, ngangishayela ngiya ekhaya futhi ngavusa isexwayiso efonini yami ukuthi esinye sezitolo engangivame ukusithola. Ukukhazimula okuphelele… Ngangena, ngasebenzisa isigqebhezana, futhi ngathola lukhulu. Bengingafuni sivumelwano futhi bengingalindele nokuyothenga ngalobo busuku - kepha kwenzeka lapho. Ukuqwashiswa kwendawo kuhlelo olukhokhelwe umthengisi!
Ozakwethu be-SIM idale i-infographic ekhuluma ngezizathu zokuthi kungani abathengisi / abathengisi kufanele bamukele isikhwama semali esingumahamba nendlwana phakathi nenkathi ezayo. Njengoba amaholidi esesondele, kubaluleke kakhulu manje kubakhangisi nabathengisi ukuthi baqonde amandla okuthenga okuhambayo:
I-whopping 56% yabathengi bathi bangathanda ukuthola okunikezwayo okususelwa endaweni ezingcingweni zabo.
Ukunikezwa kwesikhwama samaselula kuqhuba inani lokuguqulwa eliphakeme elingama-64% ngaphezulu kwamakhuphoni ewebhu.
Ukunikezwa kweselula kuqhuba ukukhuphuka okungama-26% ngenani loku-oda elijwayelekile ngaphezu kokunikezwayo kwe-static web.
Ngokweqiniso angibuzanga futhi bengingalindele nokunikezwa futhi bengikuthanda ngokuphelele! Singakanani isikhathi ongasinikeza ngokunikezwa okufanelekile kunangesikhathi lapho ithemba lisondele kakhulu esitolo sakho?
[box type = "download" align = "aligncenter" class = "" width = "90%"] Landa ama-SIMPartners Umhlahlandlela Wokuthengisa ka-2015 ukuthola imininingwane ethe xaxa ngokuthola okuningi ngesikhathi samaholide. [/ ibhokisi]
Tags: ukuthengisa okusesitolointo yokufaka ukhiyeukuqaphela indawoukunikezwa okususelwa endaweniIzinhlelo zokusebenza zeselulaisikhwama seselulaukunikezwa kwesikhwama seselulaukuthengisa okuthengiswayoAbalingani be-SIM